Nayakhabar.com: कोरियाले नेपाली कामदारको संख्या बढाउँदै, तलब पनि थप बृद्धि हुने
कोरियाले नेपाली कामदारको संख्या बढाउँदै, तलब पनि थप बृद्धि हुने
देशका विभिन्न शहरमा कोयिरन भाषाका कक्षा सुरु भइरहेका छन् । सन् २०१७ का लागि आउँदो असारमा परीक्षाको आवेदन माग हुँदैछ भने भदौमा परीक्षा हुनेछ ।
आकर्षक कमाइ हुने भएपछि धेरै नेपाली युवाहरु परीक्षा पास गरेर कोरिया जान लालयित छन् । कोरियाले विदेशी कामदारलाई स्वदेशीसरहको ब्यवहार गर्ने नीति लिँदै इपीएसमा जाने कामदारका लागि नयाँ नयाँ सुविधासमेत थपिरहेको छ । त्यसैले कोरियाको श्रम बजार पहिलेभन्दा झन आकर्षक बन्दै गएको नेपाली श्रम अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसैकारण अब नेपाली युवाको कोरियासम्मको यात्रा विभिन्न कारणले अघिल्ला वर्षहरु भन्दा फरक र सहज हुँदै गएका छन् ।
र्फम भर्दा, परीक्षा दिँदा, प्रक्रिया पूरा गरेर कोरिया जाँदा र त्यहाँ काम गर्दा पनि पहिलेभन्दा धेरै नयाँ कुरा देख्न पाइन्छ ।
अब भाषा पढेर कोरिया जाने नेपालीहरुले के-के फरक पाउनेछन् ? तपाईहरुले अब यी ८ वटा फरक पाउनुहुनेछः
१. घण्टौं लाइन बसेर आवेदन दिनु नपर्ने
कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन बुझाउन लागि अघिल्ला वर्षहरुमा लाइन नबसी सुखै थिएन । ती लाइनमा हुने भिडन्त र सास्तीका तस्वीर अब देख्न पाइने छैनन् ।
इपीएस कोरिया शाखाले यो वर्षदेखि अनलाइनबाटै र्फम भर्ने सुविधा दिँदैछ । घण्टौं घाममा सेकिँदै र पानीमा भिज्दै फारम भर्नुपर्ने बाध्यता अब नरहने इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक डिल्लाराम बास्तोला बताउँछन् ।
‘अनलाइन प्रणालीको विकास थालिसकेका छौं’ बास्तोलाले भने-‘अब इच्छुक परीक्षार्थीले आफ्नो फारम अनलाइनबाट भर्छन् र बैंकमा गएर तोकिएको शुल्क जम्मा गर्नेछन् ।’
२.परीक्षामा एमआरपी अनिवार्य
अबको भाषा परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थीलाई निरुत्साहित गर्ने शाखाले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो पटकको भाषा परीक्षामा ५९ जना नक्कली परीक्षार्थी भेटिएपछि यस्तो संख्या उच्च हुन सक्ने अनुमान गर्दै शाखाले अब फारम भर्न एमआरपी अनिवार्य गरेको छ । यसअघि नागरिकतामा मात्रै आधारित हुँदा समस्या भएकाले अब परीक्षामा सहभागी हुँदा एमआरपी लैजानैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शाखाका निर्देशक बास्तोलाले भने-‘हाम्रो परीक्षा प्रणाली लोकसेवा आयोग जत्तिकै स्वच्छ हुन्छ । एमआरपी अनिवार्य गर्ने नीति लिएपछि झन् नक्कली परीक्षार्थीलाई नो इन्ट्री, नो चान्स ।’ यसबाट योग्य परीक्षार्थीलाई कोरिया जान अवसर मिल्ने शाखाको विश्वास छ ।
बढ्दैछ कामदार कोटा
कोरियन सरकारले कति कामदार लैजाने भनेर अहिले नै कोटा तोकेको छैन । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली कामदार लैजाने क्रम बढाउँदै लगेकाले आउँदो वर्ष पनि अझ धेरैलाई कोरिया जाने अवसर प्राप्त हुने सम्भावना छ ।
अघिल्लो वर्षको परीक्षामा ५९ हजार सहभागी भएकोमा ८ हजार ४ सय ९० जनाले भाषा परीक्षा पास गरेका थिए । ठूलो संख्यामा परीक्षा दिएका युवा निरास हुनुपरेकाले नेपाल सरकारले अधिकतम् युवालाई अवसर दिन कोरियालाई अनुरोध गर्दै आएको थियो । त्यसमा कोरिया सकारात्मक देखिएको शाखा प्रमुख बास्तोलाले बताए ।
४.बढ्यो तलब, अझै बढ्दै छ
अब कोरिया जानेलाई यसअघिलाई भन्दा झनै आम्दानी गर्ने मौका पनि छ । दक्षिण कोरिया सरकारले गत माघदेखि नयाँ तलबमान लागू गरेको छ । २०१६ का लागि ८.१ प्रतिशतले तलब बढेको छ । कोरियामा वर्षैपिच्छे तलब बढ्ने भएकाले २०१७ मा पनि कामदारको आम्दानीमा वृद्धि हुने पक्का रहेको बास्तोलाले बताए ।
नयाँ पारिश्रमिकबाट कामदारले प्रतिघण्टा ६ हजार ३० वन प्राप्त गरेका छन् । तर, स्थानीय मजदुर युनियनहरुले प्रतिघण्टा १० हजार वनको तलब माग गरिरहेकाले तलव बढ्दै जाने सुनिश्चित छ । नेपाली कामदारले अहिले पनि ११ सय डलर बराबर न्युनतम् पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । कतिपय कामदारले ओभर टाइमसहित महिनामा २ हजार डलर भन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।
५.मेडिकल फेलको जोखिम कम
अहिले स्वास्थ्य जाँच प्रभावकारी नहुँदा केही नेपाली कामदार कोरिया पुगेर पनि र्फकनुपर्ने समस्या छ । छातीमा देखिने दागका कारण धेरै नेपालीले कोरिया पुगेर र्फकनुपरेकाले इपीएस शाखाले अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मात्रै स्वास्थ्य जाँच गराउने नीति लिँदै छ । यसबाट कामदारले कोरिया पुगेर पनि स्वास्थ्यका कारण र्फकनुपर्ने जोखिम कम हुने सरकाले जनाएको छ ।
यस्तै कोरियालाई पनि सरकारले नेपालबाटै प्रभावकारी रुपमा क्षयरोग जाँच गरेर लैजान भनेको छ । ‘कोरिया पुगेर अन्यायपूर्वक र्फकनुपर्ने बाध्यता हटाउन नयाँ व्यवस्था गरिनेछ’ निर्देशक बास्तोलले भने ।
नेपाली भाषामै परामर्श
कोरियन सरकारलेे विदेशी कामदारलाई परेका समस्या हल गर्न मातृभाषामै परामर्श थालेको छ । विभिन्न किसिमका समस्या भोगिरहेका कामदारलाई सहज होस् भनेर कोरियाले नेपाली कामदारका लागि नेपाली भाषामै परामर्श दिने गरेको छ ।
यसमार्फत कामदारले आफ्नो हकहित, सेवा सुविधा र काम कर्तब्य तथा अधिकारबारे जानकारी लिन सक्छन् । यो सुविधा यसअघि जानेहरुलाई थिएन ।
७. पैसा पठाउन बेग्लै तालिम
कोरियामा कार्यरत धेरै कामदारले अहिले हुण्डीलगायत विभिन्न अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरेर रकम पठाउने गरेका छन् । यसअघि जानेहरुले रेमिट्यान्स बैंकिङ सुविधाबारे जानकारी नलिएकाले यो समस्या ब्याप्त भएको सरकारको ठहर छ । त्यसैले यो वर्षदेखि कोरिया शाखाले बैंकिङ तथा रेमिट्यान्स कारोबारबारे छुट्टै अभिमुखीकरण लिन सुरु गर्दैछ ।
कोरिया जानुअघि नेपालका ‘क’ वर्गका बैंकमा खाता खोल्न अनिवार्य गरिएको छ । यसबाट कामदारले अनौपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउन छोड्नेछन् । हुण्डीमार्फत रकम पठाउँदा कामदार ठगिएका छन् भन्ने विभिन्न कानुनी समस्या भोगिरहेका छन् । अब जाने कामदारले यो समस्या भोग्नु नपर्ने इपीएस शाखाले जनाएको छ ।
८. बिजुलीमा लगानीको अवसर
कोरियामा राम्रै आम्दानी गरिरहेका युवाहरुलाई आफ्नो रकम कतै लगानी गर्ने चाहना हुन्छ । तर, दुःख गरेर कामएको रकम जथाभावी खर्च गरेर सकिएला र दुरुपयोग होला भन्ने युवाको गुनासोलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कोरियामा रहेका नेपालीको लगानीमा छुट्टै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।
कोरियामा कार्यरत नेपालीहरु अाफ्नो लगानीमा नेपालका विकास आयोजनामा लगानी गर्न निकै ईच्छा देखाएका छन् । सरकारले पनि विदेशमा काम गर्ने नेपालीको लगानीमा छुट्टै जलविद्युत् आयोजना गर्ने नीति लिएको छ ।
त्यसैले हामीले प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाएका छौं’ निर्देशक बास्तोलाले भने-‘त्यहाँ काम गरेर फर्किएका नेपाली कामदारकै अग्रसरतामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।’
यो विषयको प्रस्ताव श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगिसकेको छ । कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुको लगानीमा बन्ने आयोजना २ देखि १० मेगावाटको हुन सक्ने निर्देशक बास्तोलाले बताए ।
पूर्णतः कुनै देशमा कार्यरत नेपालीको आˆनै लगानीमा निर्माण हुने यो आयोजनालाई नमूनाका रुपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।